कांग्रेससँगको बैठकमा माओवादीनेताहरू मुस्कान दिदै । फोटोः नागरिक
मितिः २०६७ माघ ११ गते
स्थानः रिसोर्टमा हैन
सन्दर्भः माओवादी र काङ्ग्रेस शिर्षस्थ नेताहरूको बैठक
प्रस्ताबः राष्ट्रपतिले बुधबारसम्म म्यादरहने गरी सहमतिय सरकार निर्माणका लागि गरेको आव्हानको कदर गरी यथाशिघ्र निर्णय गर्ने, राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि आधार निर्माण !
उपस्थितीः प्रचण्ड, बैध्य, डाक्टर, काजि र बादल (माओवादीबाट), कोइराला, शेर, सिंह, डाक्टर महत, रामचन्द्र र निधी (कांग्रेसबाट)।
छलफलः शान्तिप्रक्रियाको आधा हिस्सा भएको र जनादेशअनुसार ठूलो दलको नेताले राष्ट्रिय सहमतिको नेतृत्व एमाओवादीले गर्नु उचित हुने माओवादी पक्षको अडान । शान्ति प्रक्रियाको थालनीमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व भएकाले यसलाई सार्थक बनाउन पनि काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु उचित हुने कांग्रेसको जिकिर ।
बैठकपछि सहभागीहरूको प्रतिक्रियाः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर असर पुग्ने कुरामा ब्यापक छलफल भएको । राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा दुवै दलका नेताहरू सकारात्मक र प्रतिबद्द प्रयास जारी राख्ने निचोड । (अझ त्यो पनि गम्भीर भावभंगीमा पारेर, क्यामेरका अगाडि त त्यति गर्ने पर्यो !)
उपलब्धीः द्भिपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठकलाई तीव्रता दिई भोलिसम्म सहमतिको प्रयास जारी राख्न दुवै दल सहमत भएका छन् ।
मेरो बुझार्इः तात्तो न छारो, गफमात्र गरेर समय खेर फाल्या छन् । सायद यिनका पनि अध्यक्ष र सभापतिका गाला चड्काउने देविप्रसाद चाहिया हो कि ?
र, अन्त्यमा यो एउटा जिज्ञासा समेतः एमालेको सहभागिता थिएन र बैठकमा ?
जबाफः अध्यक्ष कामरेडको गालामा देविप्रसादले दे'को झापडको डाम अझै नमेटिएकाले भोली सम्म बैठकमा सहभागि नहुने । हुने केहि हैन जाबो बैठक भोली बसे पनि भैहाल्यो नि ! समय छँदैछ !